သေဆုံးသွားတဲ့အခါ အသုံးမဝင်တော့တဲ့ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ - ThutaSone
February 14, 2020 ThutaSone အနုပညာရှငျမြား 0
“၁၄,၂,၂၀၂၀ မှာ ပထမဦးစွာ ကျမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကို လှူဒါန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်..ခန္ဓာကိုယ်သွားလှူတဲ့အခါ မိမိသေပြီးတဲ့အခါ အသုံးမဝင်တော့တဲ့ ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို အများအကျိုးအတွက် ဆေးပညာအထောက်အကူဖြစ်ဖို့..ကိုယ့်နိုင်ငံဆေးပညာတိုးတက်ဖို့အတွက် ပညာဒါနလဲမြောက်အောင် နှင့် မိမိ မှာ ငွေကြေးမှမဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ရဲ့ သွေး.ခန္ဓာ. မျက်ကြည်လွှာ. လှူလို့ရတာ အကုန်လှူပြီး ကုသိုလ်ယူချင်လို့ လှူခြင်းဖြစ်ပါတယ်.ဒုတိယ အလှူကတော့ မျက်မမြင်ကလေးများ ၁၉၈ ယောက်ကို VD ချော့ကလက်လေးတွေပေးရင်း. ရေဗူးလေးများဝေခဲ့ပါတယ်..
မျက်မမြင်ကလေးများအတွက် အသံဒါန ကုသိုလ်ယူခဲ့ပါတယ်..ဒါကတော့ မျက်မမြင်ကလေးများ စာမဖတ်နိုင် မမြင်ရတဲ့အတွက် စာဖတ်ပြရင်း ကုသိုလ်ယူခဲ့ပါတယ်. ဒီနေ့လေးကို ထူးထူးခြားခြား ကုသိုလ်လေးတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းဖို့ ဘေးကတိုက်တွန်းပေးနေတဲ့ သူ့ ကိုလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်”
“၁၄,၂,၂၀၂၀ မှာ ပထမဦးစှာ ကမြရဲ့ ခန်ဓာကိုယျ ကို လှူဒါနျးခွငျးဖွဈပါတယျ..ခန်ဓာကိုယျသှားလှူတဲ့အခါ မိမိသပွေီးတဲ့အခါ အသုံးမဝငျတော့တဲ့ ဒီခန်ဓာကိုယျကွီးကို အမြားအကြိုးအတှကျ ဆေးပညာအထောကျအကူဖွဈဖို့..ကိုယျ့နိုငျငံဆေးပညာတိုးတကျဖို့အတှကျ ပညာဒါနလဲမွောကျအောငျ နှငျ့ မိမိ မှာ ငှကွေေးမှမဟုတျဘူး ကိုယျ့ရဲ့ သှေး.ခန်ဓာ. မကျြကွညျလှာ. လှူလို့ရတာ အကုနျလှူပွီး ကုသိုလျယူခငျြလို့ လှူခွငျးဖွဈပါတယျ.ဒုတိယ အလှူကတော့ မကျြမမွငျကလေးမြား ၁၉၈ ယောကျကို VD ခြော့ကလကျလေးတှပေေးရငျး. ရဗေူးလေးမြားဝခေဲ့ပါတယျ..မကျြမမွငျကလေးမြားအတှကျ အသံဒါန ကုသိုလျယူခဲ့ပါတယျ..ဒါကတော့ မကျြမမွငျကလေးမြား စာမဖတျနိုငျ မမွငျရတဲ့အတှကျ စာဖတျပွရငျး ကုသိုလျယူခဲ့ပါတယျ. ဒီနလေ့ေးကို ထူးထူးခွားခွား ကုသိုလျလေးတှနေဲ့ ဖွတျသနျးဖို့ ဘေးကတိုကျတှနျးပေးနတေဲ့ သူ့ ကိုလဲကြေးဇူးတငျပါတယျ”
စစ်ကိုင်း တံတားပေါ်မှာ အလည်လောက် မီးရထားတစ်စင်း မီးလောင်နေ …
အသက်(၈၈)နှစ်အရွယ်ရှိ ကျောင်းဆရာမကြီး၏ နေအိမ် မီးလောင်းရာ စုဆောင်းထားငွေ(၄၇)သိန်း မီးလောင်ပျက်စီး